၁၇:၃၀၊ ၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ Delivery of "Wikipedia Asian Month 2020" to အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Zawthet failed with an error code of The page "အသုံးပြုသူ:KOKUYO/Message05", from wiki "metawiki", selected to be sent as message, was not found.
၁၈:၅၃၊ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ MediaWiki message delivery ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Drwinthein ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (We sent you an e-mail: အပိုင်းသစ်) စာတွဲ: MassMessage delivery
၁၅:၂၉၊ ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ MediaWiki message delivery ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:RMaung (WMF) ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Test Message!: အပိုင်းသစ်) စာတွဲ: MassMessage delivery
၁၄:၄၇၊ ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉ Delivery of "No editing for 30 minutes 17 January" to ဝီကီပီးဒီးယား:Community Portal failed with an error code of readonly
၁၂:၀၃၊ ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ Delivery of "Reminder: No editing for up to an hour on 10 October" to ဝီကီပီးဒီးယား:Community Portal failed with an error code of readonly
၁၈:၁၁၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ Delivery of "The GFDL license on Commons" to ဝီကီပီးဒီးယား:Community Portal failed with an error code of readonly
၁၇:၄၁၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ MediaWiki message delivery ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဝီကီပီးဒီးယား ဆွေးနွေးချက်:အကူအညီစားပွဲ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Growth team is looking for your feedback and ideas: အပိုင်းသစ်) စာတွဲ: MassMessage delivery
၁၃:၀၈၊ ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ Delivery of "New user group for editing sitewide CSS/JS" to ဝီကီပီးဒီးယား:Community Portal failed with an error code of readonly
၀၉:၁၈၊ ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ MediaWiki message delivery ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ် ဆွေးနွေးချက်:Ambox ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Feedback wanted on improvements to Ambox templates on mobile web: အပိုင်းသစ်) စာတွဲ: MassMessage delivery
၀၀:၃၄၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇ Delivery of "Changes to the global ban policy" to ဝီကီပီးဒီးယား:Community Portal failed with an error code of readonly
၁၇:၂၁၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ Delivery of "Invitation to Medical Translation" to အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Nomarcland was skipped because the user account does not exist
၁၇:၂၁၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ Delivery of "Invitation to Medical Translation" to အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Materialscientist was skipped because the user account does not exist
၁၇:၂၁၊ ၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၅ Delivery of "Invitation to Medical Translation" to အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Kpdr was skipped because the user account does not exist
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/MediaWiki_message_delivery" မှ ရယူရန်